Fayraska Koroona (Coronavirus) oo dilay Dhaqtarkii ugu Horreeyey oo Ka mid ahaa Bahda Caafimaadka ee dalka Shiinaha. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Dawladda Shiinaha ayaa subaxnimadii sabtida maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday geerida Dr. Liang Wudong, oo da’diisu ahayd 62-sano jir, isagoo kamid ahaa dhakhaatiirta ku mashquulsanaa sidii ay u daweyn lahaayeen dadka Fayraskaasi haleelay.
Geeridiisa ayaa timid ka dib markii uu jirkiisa saameeyey fayraska Koroona (Coronavirus) laakiin la ogaaday goor dambe ka dibna la dhigay isbitaalka uu ka shaqaynayay ilaa uu markii danbe geeriyooday.
Dhakhtarka dhintay ayaa ka mid ahaa bahdii caafimaadka ee Dawladdu u diyaarisay inay ka hor tagaan fayraska Coroona, islamarkaana ay daweeyaan dadka uu cudurkaasi saameeyey.
Dr. Liang ayaa ka shaqeynayey cusbitaalka Hubei Xinhua ee ku yaalla magaalada Wuhan, dhimashadiisa ayaa noqonaysa geeridii ugu horreysay ee ku timaada dhakhtar kmid ah kuwa ka shaqaynaya daweynta dadka Shiinaha, taasoo welwel ku abuuraysa bahda caafimaadka dalkaas.
Previous articleTaliska Ciidanka DFS oo qariyay guushii Alshabaab ay ka gaareen dagaalkii saakay ee Deegaanka Farlibaax.
Next articleSeddex Dowladood oo bixinaya dhamaan lacagaha deynta ah ee lagu leeyahay Somalia.
DEGDEG:Mursal oo farriin adag soo diray,Farmaajo oo naxsan,Dagaal Culus, RW rooble...
marqaan - September 26, 2020 0
Ali Osman - September 26, 2020 0
Ra’iisul wasaare Rooble oo xilka la wareegaya iyo dood ka taagan
Haweeneydii ugu horreysay ee Soomaali ah ee duq magaalo ka noqota...